Coming Soon – EM April Issue | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
← Comments for Vol.1, Issue.1, February Existence Magazine
လာမည်၊ မကြာပါ →
April 2, 2008 · 11:36 am
Coming Soon – EM April Issue
မဂ္ဂဇင်းဒုတိယအစောင် မထွက်သေးဘူးလားဟု အွန်းလိုင်းပေါ်တွင် တဖွဖွမေးနေကြသော ပရိသတ်များနှင့် ပထမတစ်စောင် အပြီး ဒုတိယအစောင်ကို ဆက်မျှော်နေသော စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒုတိယခြေလှမ်း ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် Vol.1, Issue.2 ကို လာမည့်တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်အတွင်း ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
ယခင်ပါဝင်နေကြ ပုံမှန်ကဏ္ဍများအပြင် ဓာတ်ပုံတို့၏ဘာသာစကား၊ သင်္ကြန်အကြိုပုံရိပ်များ၊ စိုင်းထီးဆိုင် အမှတ်တရအက်ဆေး၊ အထူးဘာသာပြန် တရုတ်ဟာသအခန်းဆက်နှင့် ကလောင်သစ်အင်အားများ စုံလင်စွာဖြင့် စာဖတ်ပရိသတ်ထံ ပို့ဆောင်ပေးပါတော့မည်။ ၀ါသနာကိုအရင်းခံ၍ စေတနာဖြင့် အခမဲ့ဖြန့်ချိသည့် မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သော်လည်း အမြဲသိမ်းထားရမည့် မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်အဆင့်ဝင်စေရန် ကြိုးပမ်းထားပါကြောင်း။
ဖွဲ့တည်ရာ (Existence) မဂ္ဂဇင်း
5 responses to “Coming Soon – EM April Issue”
ဆန်းသစ်စေသော အရာ အတွက် စောင့် ဖတ်ပါအုံးမည်။
I am going to embrace it at any rate.
လည်ပင်းရှည်အောင် စောင့်နေတယ်ဗျို့။ ပိုပြီးကောင်းလာမယ် ဆိုတာ သိလို့။ 🙂
Thank you! & Cheers!